1. Sidee loo lumiyaa miisaanka wajiga Waxaa muhiim ah in laga caawiyo wajigeena inuu muuqdo caato iyo qaab, iyo waliba albaab qalbiga ka tusaya dadka hareerahaaga ah sida aad naftaada u daryeesho. Dad badani waxay isku dayaan inay raadiyaan hab ay ku lumiyaan miisaanka wajiga ee shaqeynaya. Laakiin ilaa waqtigaas!?! Weji bararsan, wajiga wareega, dhabannada buuran, qoorta qoorta ayaa nala joogi doonta muddo dheer. Ilaa ay sababi karto walaac haweenka Kuwa doonaya in ay lumiyaan miisaanka wajiga xoogaa Laakiin maanta taas waan kuu sheegi karaa Waxa kaliya ee aad taqaan sida loo lumiyo wejiga miisaanka (Sidee loo lumiyaa wejiga miisaanka) ee aan maanta keenno. Wejigaagu wuu khafiifayaa Ilaa adiga laftaadu ogaan karto
2. Iska yaree isticmaalka karbohidraatka fudud sida bariiska cad, sonkorta la sifeeyay, cunnada fudud, jalaatada, iwm, iyo sidoo kale cuntooyinka la warshadeeyay. Kaas oo ka koobnaan doona xaddi badan oo sodium ah Keenida barar jidhka iyo wajiga labadaba Ama yaa luminaya miisaanka wajiga isagoo cunaya cunto yar-yar (Low-Carbs Diet) waa inuu xaddido cunnooyinka carb-badan. Una jeedsada cunno yar-yar oo carbuun ah oo keliya 14 maalmood oo isku xigta, waxaan bilaabi doonnaa inaan si cad u aragno natiijooyinka miisaanka oo yaraada.
3. Samee jimicsi dhammaan qaybaha jirka Xeerka suulka ee luminta miisaanka wajiga waa inuu ku milmo dufanka badan ee wejigaaga. Taas oo aan ku waayi karno miisaanka wajiga iyada oo loo marayo waxqabadyada ka soo baxa tamarta dufanka badan Leyli joogto ah 15 daqiiqo kadib Qiyaasta garaaca wadnaha ee ah 130-150 garaac daqiiqaddii, taas oo ka caawin doonta gubista dufanka jidhka iyo dhabannada xad dhaafka ah si wax ku ool ah. Marka la sameeyo illaa 30 maalmood oo isku xigta iyada oo lala kaashanayo isticmaalka karbohaydraytyada fudud. Waxay naga caawin doontaa inaan lumino miisaanka wajiga si wax ku ool ah.
4. Yoga oo loogu talagalay Baruurta Wejiga gubta ee Baruurta Waa hab aad u fudud oo lumin kara miisaanka wejiga. Kaliya waxaan qabannaa afka, digaagga, dhabannada iyo bushimaha. Kadib madaxaaga dib u janjeeri. Adoo kala bixiya qoorta iyo garka, fiiriya saqafka adoo samaynaya 10 daqiiqo, 15 jeer maalin kasta, subaxdii iyo ka hor wakhtiga jiifka 30 maalmood oo isdaba joog ah, waxay kaa caawin doontaa yareynta miisaanka wajiga si weyn.
5. Duugis adag Habkan si loo yareeyo miisaanka wajiga. Waxaan kaliya u isticmaalnaa farsamada duugista wajiga oo lagu daray kareemka subaxdii iyo waqtiga jiifka. Kaliya mari kareemka 5 qodob oo muhiim ah wajiga waa foodda, dhabannada, sanka, garka ka dibna u isticmaal labada suul dhabarkeeda. Tilmaan oo dhig macbudka labada dhinac. Kadib tartiib tartiib u isticmaal suulkaaga Ku kari ilaa qaabka V. Kadib, markay gaadhay dhabannada, way sii salaaxday ilaa foodda. Kadib tartiib tartiib u isticmaal suulkaaga Duug ilaa khadka timaha. Qaabkani waa farsamo nooga baahan in aan diirino dhabannada. Si looga caawiyo adkeynta muruqyada dhabanka oo laga caawiyo yareynta miisaanka wajiga.
6. Sida loo lumiyo miisaanka wajiga, waxaan maanta keenay. Taasi maahan wax adag, sax? Qof kasta oo leh habab kale oo weyn, ha ilaawin inaad si hoose u sheegto inaad midba midka kale u sheego. Hmph !! Sababtoo ah waxaan waayi doonnaa miisaanka wejiga si wada jir ah ^^ hehe ^^